Waa maxay sababta kalinimada loola dagaallamo waxay la mid tahay la dagaalanka gaajada - Cunnooyinka ku socda wheels
Sida hees kasta oo murugo leh ayaa kuu sheegi doonta, kali ahaanshuhu waa fikirka qofna ee madadaalo. Laakiin kordhinta cilmi baarista waxay soo jeedineysaa in dareemidda kalinimada ay saameyn ku yeelan karto wax ka badan uun xaaladdaada maskaxda.
Tusaale ahaan daraasad dhowaan soo baxday waxaa qortay USA Today. Baarayaasha ka socda jaamacada Chicago ayaa baaritaan ku sameeyay in ka badan 2,100 qof oo qaangaar ah oo jira 55 sano iyo wixii ka weyn waxayna ogaadeen in kuwa dareema kalinimada ay boqolkiiba 14 uga badan yihiin halista dhimashada dhiciska ah.
Waa ma aha daraasadda koowaad Taasi waxay gaaraysaa gabagabada, maadaama go'doomin bulsheed lala xiriiriyay xaalado sida buufis kordhay, dhiig kar iyo niyad jab. Maaddaama buurnida sii kordheysa ay xiriir la leedahay kalinimada natiijooyinka caafimaad ee xun, su'aashu waxay noqoneysaa maxaan sameeynaa bulsho ahaan si aan ula dagaallano kalinimada?
In kasta oo aysan jirin daawo fudud oo keli ahaanta ah, adeegyada sida Cunnooyinka Gawaarida ayaa hubaal caawin kara. Waxaan jecelahay inaan u sheegno mutadawiciinteena inay u keenayaan wax ka badan oo kaliya cuntooyinka guriga la geeyo ee macaamiishayada. “Kaliya maahan cuntooyinka aniga i caawiya,” ayay tiri Lenora, oo macmiil ka ah waqooyiga Minneapolis. Waxay tiri inta gabadheeda iyo wiilkeedu agtaagan yihiin oo si joogto ah u kormeeraan iyada, sidoo kale way fiicantahay in maalin walba la helo booqasho la hubo oo ka timaadda qofka cunnada siiya.
Qaar ka mid ah macaamiisheenna, qofka cuntada keenaya wuxuu ka mid noqon karaa dadka keliya ee ay maalinta oo dhan arkaan. Kuwa kale sida Lenora waxay leeyihiin saaxiibo iyo qoys aad ugu lug leh noloshooda. Inkasta oo mid kasta oo ka mid ah macaamiisheennu ay ku sugan yihiin xaalado kala duwan, waxaan u aragnaa booqashadaas saaxiibtinimo iyo hubinta amniga inay tahay wax yar oo dheeri ah oo kaa caawin kara dagaalka ballaadhan ee ka dhanka ah go'doominta bulshada.
Marka lagu daro Cunnooyinka Lugaha, waxaa jira ururo kale oo ka shaqeeya sidii ay u caawin lahaayeen yareynta go'doominta waayeelka. Walaalaha Walaalaha ah ee Waayeelka ah waa urur maxalli ah oo si gaar ah ugu heellan isku xidhka tabaruceyaasha iyo waayeelka bulshadayada.
Haddii aad taqaanid waayeel noloshaada ka tirsan oo ka faa'iideysan kara booqashooyinka joogtada ah ee mutadawiciinta saaxiibtinimada leh, barnaamijyada sida Cunnada Wheels iyo Walaalaha Walaalaha ah ee Waayeelka ayaa qayb ka noqon kara xalka. Macluumaad dheeraad ah oo loogu talagalay waayeelka sidoo kale waxaa laga heli karaa minnesotahelp.info.
Hadana haddii aadan in yar wicin hooyadaa, ayeeyadaa, eeddadaada, eedadaa ama saaxiibkaa, ka faaiidayso fursaddan inaad sidaas yeelatid. Waxay jeclaan lahaayeen inay war kaa maqlaan, waxayna u fiicnaan kartaa caafimaadkooda.